Izinyathelo ezithuthukile kuma-Botnets Ukuqonda - Uchwepheshe we-Semalt
Ibhodlela limelela ukuxhumana kwenethiwekhi. Kungachazwa njengenethiwekhi yekhompyutha eye isetshenziswe igciwane eyaziwa ngokuthi i-Malware noma ngaphansi kokulawulwa kwe-bot-herder. Yonke ikhompuyutha elawulwa umxhasi ibizwa ngokuthi ibhod. Lo mhlaseli uyakwazi ukuthumela imiyalo ebhodini lekhompiyutha ukuze enze izenzo ezilimazayo.
UMichael Brown, u-10 (Semalt uMenenja weNtuthuko yeMakhasimende, uchaza ukuthi lowo ohlaselayo angafeza izenzo zobugebengu ngokuya ngamayunithi noma ebangeni le-bots eliye lahlasela inethiwekhi yekhompyutha. Ama-bots akwazi ukwenza imisebenzi eyingozi kakhulu engatholakali nge-malware. Uma ama-botnets engena kwinethiwekhi yekhompyutha, angakwazi ukuhlala ohlelweni futhi alawulwe ngumhlaseli wakude. Ngale ndlela ama-computer anegciwane angathola izibuyekezo ezenza ziguqule ukuziphatha kwazo ngokushesha.
Ezinye zezenzo ezenziwe ngamabhodlela zihlanganisa:
Abaningi abantu bavame ukunganaki lesi sici ngoba bezwa sengathi i-imeyili isivele isisusa esidala sokuhlaselwa. Noma kunjalo, ama-botnets ogaxekile asayizi ngobukhulu futhi angahlasela noma kuphi. Zijwayele ukusetshenziselwa ukuthumela ugaxekile noma imilayezo yamanga efaka phakathi i-malware efika ezinombolweni eziningi kusuka kuwo wonke amabhodlela..Isibonelo, i-botnet ye-Cutwail iyakwazi ukuthumela imiyalezo yezinkulungwane ezingu-74 ngosuku. Lokhu kuvumela i-bots ukuthi isakaze kanjalo ithinte ama-computer amaningi nangosuku ngalunye.
Yenza isikali esikhulu samabhodlela kusiza ukuba ilayishe inethiwekhi ehlosiwe ngezinhlobonhlobo zezicelo ngaleyo ndlela yenza kube lula kubasebenzisi bayo. Umuntu uzodinga ukukhokha ukuze afinyelele kukhompyutha, futhi lokhu kubonakala ikakhulu ezinhlanganweni noma ezenzweni zomuntu siqu noma ezombusazwe ngaleyo ndlela ebaphika ukuthola ulwazi olubalulekile, futhi bazophela ukukhokha ukuze bayeke ukuhlaselwa.
Lezi zinhlayiya zenzelwe ukweba izimali ezivela kumakhadi esikweletu kanye namabhizinisi. Lokhu kutholakala ngokuba imininingwane eyimfihlo yekhadi lesikweletu. Lokhu kufaka phakathi i-botnet ye-ZeuS eye isetshenziselwe ukuweba izigidi zemali ezivela ezinkampanini eziningi.
Lezi zinhlayiyana zincane futhi zisetshenziselwa ukusiza abahlaseli ukuba bangene ezinhlanganweni futhi bathole ulwazi oluyimfihlo kubo. Lezi zenzo ziyingozi ezikhungweni njengoba zihlose idatha eyimfihlakalo neyigugu kakhulu, kufaka phakathi ucwaningo, ulwazi lwezezimali, ulwazi lomuntu siqu lomthengi kanye nempahla yengqondo.
Laba bahlaseli benziwa lapho ibhodlela liqondisa i-bots ukulawula amaseva ngokusebenzisa ama-imeyili, ukwabelana ngefayela, kanye neminye imithetho yesicelo semidiya yezenhlalo noma ukusebenzisa amanye ama-bots ukuba abe phakathi. Uma umsebenzisi wekhompiyutha evula ifayela elibi, ama-bots athumela imibiko kumyalo ovumela umculi ukuba athathe futhi enze amakhompyutha athintekile.
Ama-Botnets asebe yingozi kakhulu yokusongela ama-cyber njengoba ayinkimbinkimbi uma eqhathaniswa namanye ama-computer, futhi lokhu kuthinteka kakhulu ohulumeni, amafemu kanye nabantu ngabanye. Ama-botnets angalawula amanethiwekhi futhi athole amandla, futhi angaholela ekulahlekelweni okukhulu njengoba benza njengabaduni bangaphakathi abangakwazi ukwenza izenzo ezimbi kanjalo bechitha inhlangano.